अक्षय कुमारको ‘सूर्यवंशी’ मा को हुनेछन् खलनायक ? «
अक्षय कुमारको ‘सूर्यवंशी’ मा को हुनेछन् खलनायक ?
प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १९:५८
मुम्बई– बलिउड निर्देशक रोहित सेट्टीले निर्देशन गर्ने फिल्म फरक खाले हुन्छन् । अजय देवगनसँग सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, रणवीर सिंहसँग सिम्बाजस्ता फिल्म बनाएर चर्चा कमाएका रोहित अब सूर्यवंशी फिल्म बनाउँदैछन् ।
रोहितको फिल्ममा जति हिरोको भूमिका हुन्छ, त्यति नै खलनायकको पनि हुन्छ । पहिले खबर आएको थियो कि, यो फिल्ममा खलनायकको भूमिकामा सोनू सुदको नाम अगाडि आएको छ । तर, अहिले फिल्ममा दोस्रो खलनायकको चर्चा भइरहेको छ ।
खबरका अनुसार अक्स, गुलाल, मम जस्ता फिल्ममा नकारात्मक भूभिका निभाएका अभिमन्यु सिंहले ‘सूर्यवंशी’ मा अक्षयकुमारसँग टक्कर लिँदैछन् । उनले कैयन् फिल्ममा नकारात्मक भूमिका निभाइसकेका छन् ।
अभिमन्युले एक अन्तर्वार्तामा रोहितले आफूलाई तमिल एक्सन थ्रीलर फिल्म थीरान हेरेर रुचाएको बताएका छन् । उक्त फिल्ममा अभिमन्यु एक खलनायकको भूमिकामा छन् । त्यही फिल्म हेरेर रोहित सेट्टीले आफूलाई सूर्यवंशीबाट अफर आएको बताएका छन् ।
‘सूर्यवंशी’ मा आफ्नो भूमिकाका बारेमा बताउँदै अभिमन्युले भने, ‘मेरो भूमिका निकै अप्रत्याशित र घातक छ, पात्रले देशका पूरै प्रहरीका विरुद्ध एउटा युद्ध थालेको हुन्छ, अक्षय कुमारसँग काम गर्दाको पहिलो दिन अद्भुत थियो ।’
यो फिल्म आतंकवादको विरुद्धमा हुनेछ । फिल्ममा अक्षय कुमार एक एटीएस अफिसको भूमिकामा हुनेछन् । फिल्म सन् २०२० को ईदमा रिलिज हुने भनिएको छ ।